Puntland Xaq Ma U Leedahay In Xuduudaheeda Ay Ka Xidhato Madaxda Soomaaliya? – somalilandtoday.com
Puntland Xaq Ma U Leedahay In Xuduudaheeda Ay Ka Xidhato Madaxda Soomaaliya?
(SLT-Garoowe)-Tan iyo markii maamulka Puntland ay soo saareen amar ah in deegaanadeeda ay ka mamnuucday Wasiirada Dawladda dhexe iyo shaqaalaha kaleba inta ay socoto doorashada Puntland aya waxaa iminka muuqataa in taasi ay hirgahsay.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda Amniga ee Puntland ayaa horay loogu sheegay in madaxda federaalka laga mamnuucay inay Puntland soo galaan.
Madaxda Puntland ayaa horay Shirkadaha Diyaaradaha imaanaya Puntland ugu amray inay soo gudbiyaan liiska dadka ay sidaan, inta aysan ka soo duulin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo horay BBC-da ugu sheegay in sababta looga mamnuucay mas’uuliyiinta dawladda Federaalka ah in ay soo galaan Puntland ay tahay, in faragalinta dawladda federaalka ah laga hortago.
”Sidaad ogtihiin dawladda waxa ay fara galin ba’an ku haysaa Maamul Goboleedyada,tusaale doorashadii ka dhacday maamulka koonfur galbeed marka ma dooneeyno in ay punland taasi oo kale ka dhacdo,” ayuu yiri wasiir Cabdi Xirsi
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in ay xireen dhamaan kontoroolada magaalada Garowe, ayn jiri doonin wax gaadid ah oo ka imaanaya gobolada kale ee dalka.
Dad badan ayaa haddaba isweydiinaya sharci ahaanshaha go’aanka Puntland ee ah inay deegaanadeeda ay ka mamnuucdo saraakiisha Dowladda Federaalka.
Abuukaate Tahliil Xaaji Axmed ayaa go’aanka Puntland ku tilmaamay mid aan waafaqsaneyn dastuurka soomaaliya.
‘Dastuurka kuma qorno wax awood ah oo nocaasi oo kale ah in (Puntland) ay soo saaraan amar ah in dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan tagi karin deegaanada Puntland, waxay u dhigantahay xadgudub dastuurka ka dhanka ah, wana sharci darro ”. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Abuukaate Tahliil Xaaji Axmed.
Tahliil ayaa sidoo kale sheegay in Puntland xadgudub ku sameyeen dastuurrka iyo in wax sharciga uusan oggoleyn oo ah in qeyb kamid ah Soomaaliya ay dowladda ka joojiyaan.
Abuukaate Tahliil ayaa mar aan wax ka weydiinay qaabka ay u wada shaqeyn karaan Dowladda Federaalka iyo Puntland ayaa waxaa uu yiri:
”Soomaaliya waa hal dowlad, balse waxay u kala qeybsantaa dowlad goboleedyo lagu baahiyay xukunka, xitaa awood uma lahan in dowlada shisheeye ay dalka ka celiyaan, oo awoodaasi waxaa iska leh dowladda dhexe, qof Soomaali shacab ah oo meel kale ku dhashay gobol Soomaaliyeed looma diidi karo”.
Puntland ayaa lagu wadaa in 8-da bisha Janaayo ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, waxaana laga warsugayaa sida uu noqon doona xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland, taasi oo ku xirnaan doonta cidda guuleysata.